नियम र दशा सप्ताहन्त प्रोमो लागि |
सम्म 50 खुल्ला Aloha दैनिक नियम र सर्तहरू SPINS
यो पदोन्नति 10 औं बीच सक्रिय हुनेछ – 12औं र 17 औं – 19th नोभेम्बर 2017.
GMT ACST -8.30hrs को बराबर छ, PTZ + 8बजे
निम्न बोनस उपलब्ध छन्:
£ 10 बीच जम्मा & £ 19 को बोनस प्राप्त गर्न 10 बोनस Spins.
£ 20 बीच जम्मा & £ 49 को बोनस प्राप्त गर्न 20 बोनस Spins.
जम्मा £ 50 वा माथिको बोनस प्राप्त गर्न 50 बोनस Spins.
बोनस Spins लाग्न सक्छ3पदोन्नति को अन्त देखि काम दिन आफ्नो खातामा जम्मा गर्न. Spins कुनै पनि winnings बोनस कोष मा सम्मानित छन्.
बोनस कोष 30x एक wagering आवश्यकता तपाईंको सान्दर्भिक बोनस रकम योगफल बोक्न र कुनै पनि winnings capped नगद रूपान्तरित अघि भेट हुनुपर्छ.
यो पदोन्नति देखि कमाएका बोनस रकम, केवल केहि स्लट खेल मा प्ले गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ.
4एक्स रूपान्तरण: अधिकतम रूपान्तरण बोनस रकम बाट नगद गर्न रकम 4x बोनस रकम प्रदान गरिएको छ मा capped गरिनेछ. एक पटक wagering पूर्ण बोनस रकम स्वतः रूपान्तरण.
खेलाडी मात्र एक बोनस कुनै एक समयमा सक्रिय हुन सक्छ भनेर सम्झाइन्छ, कृपया जानुहोस् “मेरो प्रोफाइल” आफ्नो सम्पूर्ण बोनस लाम हेर्न खण्ड
कृपया responsibly गैंबल. थप जानकारीको लागि www.begambleaware.org भ्रमण.